Dagaal culus oo ka dhacay deegaanka Ceel Shiil ee gobolka Galguduud.
Ceelbuur:-Dagaal culus ayaa maanta duhurkii waxaa uu ka qarxay deegaanka Ceel Shiil ee gobolka Galguduud kaas oo u dhexeeya ciidanka Al-Shabaab iyo Ururka la baxay Ahlu Sunna wuxuuna sababay khasaaro leh dhimasho iyo dhaawac.
Dagaalka ayaa qarxay ka dib makii ciidamada Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen kuwa Ahlusuna oo ku sugnaa deegaanka Ceel Shiil ee gobolka Galguduud.labada Urur ayaa guulo ka sheegtay dagaalka maanta ka dhacay deegaanka Ceel Shiil
Sarkaal u hadlay Ururka Al-Shabaab ayaa sheegay in ay dagaalkii maanta ka dhacay deegaanka Ceel Shiil ee gobolka Galguduud ay guul ka gaareen ayna la wareegeen deegaanka Ceel Shiil ee gobolka Galguduud.
Afhayeenka Ururka la baxay Ahlu suna ee gobalka Galgaduud ayaa guul ka sheegtay isagana dagaalkii maanta mar uu la hadlay warbaahinta ka howlgasha gobalka Galgaduud.
Isku wada duuboo waxaa ka socda gobalka Galgaduud dagaalo dhuumaaleysi ah oo ay Al-Shabaab ku qaadayaan Ururka Ahlusuna iyo ciidanka Itoobiya oo haatan qabsaday deegaano badan oo ka tirsan gobalka Galgaduud.